फुर्ति मार्केटिंग ईभोलुसन हो, क्रान्ति होईन, र किन तपाईंले यसलाई अपनराइट गर्नुपर्छ Martech Zone
फुर्ति मार्केटिंग ईभोलुसन हो, क्रान्ति होईन, र किन तपाईंले यसलाई अपन गर्न आवश्यक छ
बिहीबार, सेप्टेम्बर 18, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 जसचा काकास-वुल्फ
भवन निर्माणबाट सफ्टवेयरसम्म।
सन् १ 1950 .० को दशकमा झरना विकास मोडेल सफ्टवेयर डिजाइन र विकासमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रणाली निर्माण उद्योगको एउटा अवशेष हो जहाँ कामको थालनी गर्नु अघि, आवश्यकताको साथ, सही उत्तर खोज्नुपर्‍यो। र, त्यो संसारमा, सही उत्तरले अर्थ दिन्छ! के तपाईं एक दृश्य कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंले बिल्डको माध्यमबाट अर्ध तरिकाले गगनचुम्बी भवन बनाउने निर्णय गर्नुभयो?
त्योले भने, सफ्टवेयर विकासमा यस प्रक्रियाको उपयोगको उप-उत्पादन भनेको सफ्टवेयरको डिजाइन (फीचर + ux) हुनु पर्‍यो। ठिक अगाडि एक विशिष्ट विकास चक्र एक मार्केट र एक समस्या मा केहि अनुसन्धान गर्दै मार्केट आवश्यकता कागजात र / वा उत्पादन आवश्यकता कागजात को रूप मा आफ्नो अन्तरदृष्टि प्रदान संग शुरू भयो। बिकास टोलीले मार्केट चाहेको कुरालाई विकास टोलीले फेरि तल झार्नेछ र निर्माण गर्‍यो र तिनीहरूले समाप्त गरेपछि तिनीहरूले समाप्त गरिएको उत्पादनलाई मार्केटि team टोलीमा पुर्‍यायो जसले ग्राहकलाई सहयोग पुर्‍यायो। यस मोडेलले काम गर्यो। र यसले माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूको लागि धेरै राम्रो काम गर्‍यो।
यस प्रक्रियामा केहि हराइरहेको छ। ग्राहक।
फुर्ती भनेको के हो?
विरोधी पागल पुरुष दृष्टिकोण।
एक श्रेणीबद्ध व्यापार मा एक चपल कम्पोनेन्ट स्थापना गर्दै
दिमागमा राख्नको लागि तीन मार्गनिर्देशन
फुर्ती भनेको नेतृत्वको बारेमा हो, अधिक व्यवस्थापनको बारेमा होइन
आँखा रोलिlingको रूपमा के सुरु हुन्छ आँखा खोल्ने बन्न सक्छ - यदि तपाईंले अनुमति दिनुभयो भने
बुक अर्डर गर्नुहोस्
90 ० को दशकको अन्ततिर इन्टरनेट द्रुत गतिमा नयाँ फ्याled्ग्ड इन्टर्नेट कम्पनीहरूसँग स्ट्याक गरिएको वाणिज्यिक आकर्षण केन्द्रको रूपमा बृद्धि भइरहेको थियो र सम्भाव्य रूपमा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सफ्टवेयरको विस्तारका लागि एक व्यावहारिक माध्यम प्रदान गर्न सुरु गरिरहेको थियो। अब डेभेलपरले मार्केटिंग टीमलाई उनीहरूको अन्तिम उत्पादनहरू गोल्ड मास्टरमा सुम्पन आवश्यक पर्दैन उनीहरूले अन्तिम कोड सीधा इन्टरनेटमा र सिधा ग्राहकमा लगाउन सक्दछन्।
सीधा ग्राहकमा तिनीहरूको सफ्टवेयरको तैनातीको साथ, विकासकर्ताहरू र डिजाइनरहरू कसरी तिनीहरूको उत्पादन काम गरिरहेको थियो भनेर मात्रात्मक डाटामा तत्काल पहुँच थियो। मार्केटिंगबाट गुणात्मक प्रतिक्रिया होइन तर वास्तविक ग्राहक अन्तर्क्रिया डाटा। कुन सुविधाहरू प्रयोग गरिएको थियो र कुन थिएन! सबै राम्रो समाचार ठीक छ? होईन
झरना विकास मोडेल र यसको व्यवसाय प्रक्रियाहरू जसको लागि पछिल्लो आधा शताब्दीले सफल मार्ग प्रदर्शन गर्यो काम गर्न रोकियो। यसले वास्तविक-समय प्रतिक्रियाको लागि अनुमति दिँदैन। द्रुत पुनरावृत्तिको कुनै अवधारणा थिएन।
२००१ मा विकासकर्ताहरू र संगठनात्मक विचारकहरूको समूहaमा भेटे युटाको पहाडहरूमा रिसोर्ट कसरी नयाँ प्रक्रिया ग्राहकहरु लाई राम्रो जडान सक्षम गर्न सक्छ र अझ राम्रो टीमहरु र राम्रो सफ्टवेयरको परिणाम। त्यो बैठकमा फुर्ती विकास आन्दोलनको जन्म भएको थियो र अब यो निर्माण सफ्टवेयरको लागि प्रमुख प्रणाली मानिन्छ। पछिल्लो पटक कडा सोच्नुहोस् जब तपाईंले कुनै ईन्जिनियरि team टोलीलाई भेट्नुभयो जुन उनीहरूको ब्याकलोग र उनीहरूको वर्तमान स्प्रिन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दै थियो ... यो गहिराइ हो कि यस प्रणालीलाई कति चाँडो र पूर्ण रूपले अपनाइएको छ।
हाम्रो ईन्जिनियरि Marketing भाइहरूले विगत शताब्दीको मार्केटि relatively्ग विधिको तुलनामा कुनै असर नपार्ने सबैभन्दा विघटनकारी प्रक्रियाको साथ व्यवहार गरिरहेका थिए। ईन्जिनियरि in्गको नयाँ चपलताबाट हाम्रो फाइदा भनेको यो भन्न सक्ने हाम्रो क्षमता थियो हाम्रा उत्पादनहरू निरन्तर पठाइन्छन्। यस बाहेक, हामी अन्धाधुन्धले बिगतका १००+ बर्षदेखि प्रयोग गरिरहेका व्यापार प्रक्रियाहरू र प्रणालीहरू मार्फत लड्यौं। प्रक्रियाको एक सेट जुन वाटरफाल विकास मोडेलको समान रूपमा देखिन्थ्यो।
मार्केटिंगको साथ आयो ठिक एक अभियान, एक ट्यागलाइन, लोगोको रूपमा उत्तर दिनुहोस् र त्यसपछि हाम्रो कामबाट उदय हुनुभन्दा अघि हामीले यस कार्यको अध्यक्षता गर्ने च्यानलमा काम गर्न सुरु गर्यौं। र हामी किन परिवर्तन हुनेछौं? यो प्रयास र सही प्रक्रिया दशकहरु को लागी काम गरीरहेको छ। तर यसले काम गर्दैन र हामीसँग डोर्सी र जकरबर्ग धन्यबाद छ।
सामाजिक नेटवर्कको लोकप्रियताले हाम्रो ग्राहकहरु र सम्भावितहरुलाई हाम्रो अभियानहरु, ट्यागलाइनहरु र लोगो मा सामूहिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनको लागि यसलाई अविश्वसनीय रूपमा सजिलो बनाएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो? यो तथापि, मार्केटिंगमा हुनुपर्दछ, हामी व्यापारको अभावका कारण प्रतिक्रिया दिन सक्ने हाम्रो क्षमतामा ह्यामस्टर् are्ग भएका छौं। हामी फुर्तिलो छैनौं।
२०११ मा, सान फ्रान्सिस्कोमा, मार्केटरहरूको समूहले सामाजिक र प्राविधिक परिवर्तनहरू छलफल गर्न भेला भयो जुन मार्केटिंग टोलीहरूलाई बिभिन्न रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। एक मान्यता कि ईन्जिनियरि। र मार्केटिंग बीचको समानताहरू प्रासंगिक थिए र Agile विकास घोषणापत्र मार्केटिंगको लागि नमूना हुनुपर्दछ।
यस बैठकमा डब गरियो स्प्रिन्ट शून्य यी बजारहरूले ड्राफ्ट गरे फुर्ति मार्केटिंग घोषणापत्र र विगत years बर्षमा हामीले देख्यौं कि Agile मार्केटि ofको अवधारणा होल्ड गर्न थाल्छ।
फुर्सत एक व्यवसायीको व्यावहारिक, दिन प्रति दिन आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक व्यवस्थित तरीका हो, जबकि अझै नयाँ "अवसर" प्रयोग र अन्वेषण गर्न केही "अव्यावहारिक" समयको संरक्षण गर्दछ। पेंडुलम निरन्तर नवीनता (नयाँ विचारहरूको साथ आउँदछ र उपन्यास समाधानहरू प्रयास गर्दै) र मार्केटि ((ग्राहकहरूको लागि तपाईंलाई के काम चाहिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्) र फुर्तिलो हुँदा दुबैको प्राथमिकताका लागि समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
इमानदार हुन गरौं। चाहे यो वास्तविक वा सांस्कृतिक अवरोधका कारण हो, प्रायः व्यवसायहरूलाई लाग्छ उनीहरूसँग समय वा पैसा छैन प्रयोग गर्न - र हुनसक्छ कहिल्यै। तर प्रयोग बिना, यथास्थिति व्यवसायहरू अन्ततः विघटनकारी व्यवसायको लागि गुमाउँछन्। नयाँ व्यापार अवसरहरूको आधारमा प्रयोग नगर्नु भनेको भनेको तपाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सिक्न, बढ्न, र परिवर्तनको लागि ज्यादै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ।
यो सामान्य दुविधा प्रश्न माग्छ:
तपाईंको कम्पनीले कसरी आजको द्रुत-आगो रणनीतिक चुनौतिहरूको पूँजीकरण गर्न सक्दछ जबकि अझै अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय नम्बरहरू भेट्दछ?
म विश्वास गर्दछु कि उत्तर चपल ब्यबहारहरू प्रयोग गर्नु हो, जसमा धेरै सानो, नापिएको, अन्वेषणात्मक चरणहरू सामिल छन् - एउटा ठूलो, महँगो, छेसेको इन-स्टोन रणनीति होइन। अर्को शब्दमा, फुर्तिलो एन्टी-पागल पुरुष दृष्टिकोण हो।
फुर्तीले एक स्थिर प्रक्रियामा अज्ञात विचारहरू अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जसले दक्षताको विश्वसनीय स्तरको साथ नवीनता प्रदान गर्दछ। यो नयाँ चीजहरूको प्रयास गर्ने तरीका हो र अझै तपाईंको नम्बरहरू बनाउँदछ। नवीनताका लागि एक प्रमुख अवरोध हो कि परम्परागत कम्पनी पदानुक्रम संरचना कार्य भूमिका परिभाषा, राजनीति द्वारा, र जोखिमलाई बढ्तै घृणा गरेर धेरै धेरै नवीन कर्मचारीहरूलाई समावेश गर्दैन।
कोटरले सूचीकृत गर्दछ आठ आवश्यक तत्वहरू परम्परागत व्यवसाय भित्रबाट एक खोजी संस्कृति विकास गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ। यी समान तत्वहरू हुशारी अभ्यासहरू विकास गर्न आवश्यक छ, म विश्वास गर्दछु।
तत्काल महत्वपूर्ण छ - व्यवसाय अवसर वा खतरा तुरुन्त कार्यको लागि तत्काल हुनु पर्छ। हात्तीलाई सम्झनुहोस्। ऊ भावनामा दगुर्छ। ऊ भित्र पस्न सक्ने खतरा खोज्नुहोस्।
मार्गनिर्देशन गठबन्धन स्थापना गर्नुहोस् - नयाँ जोसिला नेटवर्कको हिस्सा बन्न चाहनेहरूका लागि तिनीहरू विभिन्न विभागहरूबाट आएका हुनुपर्दछ र पदानुक्रम भित्र व्यापक स्तरको जिम्मेवारी र अधिकार हुनुपर्दछ। र, सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, गठबन्धनका सदस्यहरू फुर्सत नेटवर्कमा स्वयंसेवक हुनुपर्दछ। यो व्यक्तिहरूको समूह बनाउने हो, समूह होइन।
पहल को विकास को माध्यम बाट एक दृष्टिकोण छ, उत्तरहरु को लागी प्रश्नहरु को लागी परीक्षण को लागी। - जे भए पनि व्यापारको अवसर, तपाईले के आशा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्नुहोस् जुन तपाईले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तिनीहरू गलत छन् भने पनि, तिनीहरू स्वाभाविक चाहनालाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सेवा गर्न आवश्यक छ। यो दर्शनले चासो र जिज्ञासालाई देख्दछ।
पूरै चपल समूह र कम्पनीको बाँकीबाट खरीदको लागि दृष्टि संचार गर्नुहोस्। - तपाईंको परिकल्पना स्पष्टसँग बताउनुहोस्। उनीहरूमा स्पट हुनु हुँदैन, तर ती रोचक हुनुपर्दछ। सबैलाई एक विचार दिनुहोस् किन तपाईले राम्रो लेखकको अन्वेषण र छनौट गर्न केही पहल गर्नुभयो किन जसले यसलाई सरल, सरल भाषामा अभिव्यक्त गर्न सक्दछ।
सशक्त विस्तृत-आधारित कार्य। - वर्गीकरणको शक्ति पनि यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। सबै निर्णय लिने शीर्ष मा relegated छ। फुर्ति नेटवर्कमा, विचार र विशेषज्ञता जोसुकैबाट पनि आउँदछ। जहाँ एक गाईड गठबन्धन छ, उद्देश्य भनेको अवरोधहरू हटाउने हो, कमाण्डको चेन राख्दैन। त्यो आवेग नियन्त्रण पुन: प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै पदानुक्रम हो।
सानो, दृश्यात्मक, छोटो अवधि का जीत मनाउनुहोस्। - तपाईंको फुर्सत नेटवर्क लामो समय सम्म रहदैन जबसम्म तपाईं मूल्य एकदम चाँडै देखाउनुहुन्छ। पदानुक्रम skeptics तपाइँको प्रयासहरु कुचुन को लागी छिटो हुनेछ, त्यसैले तुरुन्तै ठूलो नहुनुहोस्। केही सानो गर्नुहोस्। एक प्राप्य पहल छान्नुहोस्। यो राम्रोसँग गर्नुहोस्। फुर्ति प्रक्रियाको अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो गति निर्माण गर्दछ।
हार नमान्नुहोस्। - एकै समयमा तपाईंलाई विजय चाहिन्छ, धेरै धेरै विजयको घोषणा पनि नगर्नुहोस्। फुर्ती गल्तीहरू र समायोजनबाट सिक्ने बारेमा हो। अगाडि बढाउनुहोस्, किनकि जब तपाई आफ्नो खुट्टा ग्यासबाट निकाल्नुहुन्छ, त्यसबेला सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रतिरोध खडा हुनेछ। तपाईंको नेटवर्क पहलका लागि समय बनाउनुहोस्। यसमा अडिग रहनुहोस्, जतिसुकै नियमित, व्यस्त काम पप अप हुन्छ।
परिवर्तन र पाठ समावेश गर्नुहोस् सम्पूर्ण व्यवसायको संस्कृतिमा। - यो छिटो नेटवर्कले हायररार्कीलाई सूचित गर्न सक्दछ। जब तपाइँले केहि गर्न राम्रो तरीकाहरू पाउँनुहुन्छ वा नयाँ अवसरहरू पछ्याउन, तिनीहरूलाई "अर्को" पक्षमा काम गर्नुहोस्।
केवल ती कोट्टरको आठ चरण सफलताको कुञ्जी मात्र होइन, तर दिमागमा राख्न उसले तीन मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरू दिन्छ।
आठ चरणहरू अनुक्रमिक छन्। यी चरणहरू एक मोडल हो, प्रक्रिया वा प्रक्रिया होईन — आकार, अर्डरली प्रगति होइन। तिनीहरू सबै हुनुपर्दछ, तर तिनीहरू कुनै विशेष क्रममा हुनु हुँदैन। अर्डरको बारेमा धेरै चिन्ता गर्दै स्टीम नगुमाउनुहोस्।
फुर्ति नेटवर्क एक स्वयंसेवी सेना को बनेको हुनु पर्छ। लगभग १०% कार्यबल पर्याप्त हुनेछ, जबसम्म नेटवर्कमा मानिस त्यहाँ हुन चाहन्छन्। सहभागिताका लागि अनन्य वा बन्द नगर्नुहोस्, तर १००% संरचनात्मक दिमाग भएका मानिसहरूलाई भर्ना गर्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस्, किनकि उनीहरू त्यहाँ रहन रमाउँदैनन् र तिनीहरूले यसको मूल्य देख्दैनन्। कोटरले भने जस्तै,स्वैच्छिक सेना ब्रासको माग पूरा गर्ने ग्रन्टहरूको समूह होइन। यसका सदस्यहरू परिवर्तन नेताहरू हुन् जसले ऊर्जा, प्रतिबद्धता, र उत्साह ल्याउँछन्।"
यो फुर्तिले ब्यक्तिसँग कार्य गर्ने मानिससँग कार्य गर्नै पर्छ, तर लचिलोपन र चपलताको लागि नेटवर्क कायम गर्नुपर्दछ। नेटवर्क सौर प्रणाली जस्ता हो जुन केन्द्रमा मार्गनिर्देशन गठबन्धन र पहल र उप-पहलहरू एकसाथ आउँछ र आवश्यकता अनुसार विच्छेद गर्दछ। नेटवर्क एक "दुष्ट अपरेशन" को रूप मा हेर्न सकिदैन वा पदानुक्रम अनावश्यक रूपमा यसलाई कुचल्नेछ।
चपलता राम्रो कार्य, अवसर, प्रतिक्रिया, सोधपुछ, जिज्ञासा, प्रेरित कार्य र उत्सवको लागि आधुनिक कार्यस्थल पुनर्मिलन गर्ने एक खेल हो। यो परियोजना व्यवस्थापन, बजेट समीक्षा, रिपोर्टि,, कमाण्डको चेन, क्षतिपूर्ति वा पागल पुरुषको जवाफदेहीता छैन सबै रणनीति हो। यो एक संस्था मा दुई प्रणाली हो कि पूरकdनक्कल छैन – एक अर्कालाई। आदर्श रूपमा, जो चपल नेटवर्कमा फल्छ कामदारहरूले पनि नयाँ पतन ऊर्जा पदानुक्रममा ल्याउन सक्दछन्।
नयाँ फुर्ति नेटवर्कलाई सुरुमा एउटा ठूलो, नरम, स्क्विशी, कर्मचारी संलग्नता व्यायाम जस्तो लाग्न सक्छ। ठिक छ! यो विकसित हुन्छ। यो अचानक वा नाटकीय परिवर्तन होइन। टीम निर्माण अभ्यास जस्तै, यो समयको साथ विकसित आराम र विश्वास को एक निश्चित स्तर लिन्छ।
गरि राख। चरणहरू सानो राख्नुहोस्। सुरुबाट विजयहरू सञ्चार गर्नुहोस्। मौजूदा हाइरार्कीमा फुर्ति नेटवर्क बेच्दा तपाईको खुट्टा तल पाउनुहोस्। यदि तपाईं यी सबै गर्नुहुन्छ भने, वर्गीकरणको मूल्य उदारतापूर्व, मूर्ख, समयको बर्बादी, वा जुनसुकै अन्य जोखिमपूर्ण रूपमा १०% काटिस्टेट गर्न% ०% को बाहिर आउँछ भने यसलाई खारेज गर्नु अघि उदय हुन्छ।
आजको समयको बर्बाद भोलीको महान विचारमा जान्छ। फुर्तिलो काम, जस्तै रचनात्मकता - 95%% वा अधिक राम्रो सफलता दरहरूको खेल होईन। यदि यो थियो भने, तब सबैजनाले यो गरिरहेका थिए।
र त्यहाँ कुनै अवसर हुने थिएन, यदि सबैले यो गरिरहेका थिए।
छिटो बढ्दै। किन फुर्ति मार्केटिंग र व्यापार मात्र प्रासंगिक छैन तर आवश्यक छ।
टैग: तीजफुर्ति मार्केटिंगफुर्ति अभ्यासव्यापार रणनीतिछिटो हुर्किएकोनवीनताजसचा काकास-वुल्फकोटरपागल मान्छेमार्केटिङबजार नेतृत्वमार्केटिङ रणनीतिझरना विकास मोडेल
जसचा काकास-वुल्फ दुई मुख्य सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्दछन्: अवसरहरू खोज्नुहोस् जहाँ अरू कोही पनि खोजिरहेको छैन; र, एकैचोटि दुई पटक असफल कहिल्यै। यो Agile मार्केटिंग अभ्यासको वरिपरि केन्द्रित एक पद्धति हो। ह्विटियर कलेजबाट मनोविज्ञान मा बीए संग जोडे, यो एक हो कि उसलाई राम्रो व्यावसायिक र व्यक्तिगत सेवा गरेको छ। याहू !, माइक्रोसफ्ट, वेबट्रेंड्स, इन्भोलभर (ओराकलले अधिग्रहण गरेको), र मिन्डजेटमा कार्यकारी ब्यबहार अनुभवको साथ लामो समयका मार्केटर र परामर्शदाताका रूपमा अब उनी मार्केटिंगको नेतृत्व गरिरहेका छन्। BitTorrent.
सामाजिक मिडियाको लगानीमा फिर्ताको मापन कसरी गर्ने